Wasiirka Batroolka Soomaaliya oo sheegay in howlgalada shidaal baarista Soomaaliya ay noqon doonaan kuwo daah-furan - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaWasiirka Batroolka Soomaaliya oo sheegay in howlgalada shidaal baarista Soomaaliya ay noqon doonaan kuwo daah-furan
January 21, 2020 Puntland Mirror Somalia 0
Wasiirka Batroolka Dowladda Federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed. [Sawir Hore]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasiirka Batroolka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in howlgalada shidaal baarista Soomaaliya ay noqon doonaan kuwa daah-furan, sida ay ku warantay warbaahinta dowladda maanta oo Talaado ah.
Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa cadeeyay in weli aan la gaarin xilligii la bilaabi lahaa howlgalada shidaalka Soomaaliya, maxaa yeelay weli waxaa dhiman howlo muhiim ah oo u baahan in la dhammaystiro.
Hadalkiisa ayaa imaanaya maalin kadib markii warbixin ay daabacday wakaalada wararka Reuters ku soo xigatay Madaxweynaha Turkiga oo sheegaya in Soomaaliya ay Turkiga ku casuntay in uu shidaal ka baaro badaheeda.
Waxa uu sheegay in Soomaaliya ay xiriir wanaagsan la leedahay Turkiga, balse arrinta shidaal barista Soomaaliya ay noqon doonto mid aan cadaalad ah iyadoo aan cid gaar ah la door bidin.
Sharciga shidaalka Soomaaliya ayaa waxaa meelmariyay haayadaha sharci-dejinta dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana uu hadda sugayaa saxiixa madaxweyne si uu noqdo mid rasmi ah.
Balse sharciga ayaa waxaa ka soo horjeestay dowlad goboleedyada kala ah Puntland, Jubbaland iyo Galmudug, kuwaasoo sheegay in loo maray hab khaladan, iyadoo aan la tashi lala samayn.
May 20, 2019 Baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo meelmariyay xeerka shidaalka
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland President Abdiweli Mohamed Ali has fired seven top officials at Ministry of Fisheries and Marine Resources after being found of guilty corruption, a statement from the presidential palace said on Wednesday afternoon. [...]
Garowe-(Puntland Mirror) Some members of Garowe’s local council has accused Care International of corruption on the town’s planting project, which is funded by European Union. Speaking to reporters in Garowe, Mowlid Aw-ahmed Yousuf, who is [...]
Beijing-(Puntland Mirror) Diyaaradii ugu horeysay oo gudaha dalka Shiinaha lagu sameeyo ayaa dhammeystirtay duulimaadkeedii ugu horeeyay, taasoo caqabad weyn ku ah shirkadaha sameeya diyaaradaha ee Boeing iyo Airbus. Kadib 90 daqiiqo oo ay hawada ku [...]